Poseidon Tattoo Dhizaini | Kunyora
Mavara ePoseidon, mwari wemakungwa
Nat Cherry | | Tattoos, Kufungidzira Tattoos
Nhasi tinoda kugovana newe zvinoreva Poseidon nyora, dhizaini ingaite senge isishoma kwauri, kunyangwe paine nzvimbo kwazviri.
Tiri kutaura nezvematatoo e Poseidon kana Neptune zvinoenderana netsika (chiLatin kana chiGiriki), mucherechedzo wemvura, gungwa nemakungwa. Vanhu vazhinji vanoshanda mugungwa vanosarudzira chinhu ichi chavo vanamwari nyora, sechiratidzo chekudzivirira kwavari.
1 Hove huru paOlympus
2 Zvinorevei izvi tattoo?
3 Poseidon tattoo mazano
3.1 Gungwa, humambo hwaPoseidon
3.2 Mermaids nedzimwe ngano vagari vegungwa
3.3 Dolphin, iyo inoerera yegungwa
3.4 Mabhiza, chimwe chiratidzo chake
3.5 Iyo trident, chiratidzo chayo chikuru
3.6 Triton, mwanakomana waPoseidon
3.7 Nyika Neptune
3.8 Chirevo cheOdyssey
3.9 Uye zvechokwadi Poseidon
Hove huru paOlympus
Poseidon ndomumwe wevamwari gumi nevaviri veOlympian, vachimuita bara rakakura muParthenon. Aive munin'ina waZeus, aive anotarisira nyika nemhepo. Poseidon, kune rumwe rutivi, aifanira kuve ishe wemakungwa. Mukupesana, Hadhesi, mukoma wechitatu wemhuri iyi yevanamwari, ndiye aive achitonga kutonga pasi pevhu.
Pamusoro pegungwa, Poseidon ainamatwa samwari wekudengenyeka kwenyika, uye nenjodzi yake yemashiripiti akakwanisa kuita zvitubu kumera chero kwaaida uye kudaidza madutu. Zvakare, kunyangwe aive mwari wemakungwa, Poseidon aifarira kufamba nemutyairi wengoro pane nechikepe, achigara achidhonza nezvikara hafu bhiza hafu yegungwa nyoka.
Uye zvakare, Poseidon aive muridzi anozvikudza wechitsuwa chave kungoita ngano: iyo Atlantis.
Zvinorevei izvi tattoo?
ari Poseidon maTattoos anotsvaga kuwana dziviriro kubva kuna mwari uyu, uyo paakange aine mweya wakanaka akapa makungwa akadzikamaNdosaka iri dhizaini rinokosheswa nevanhu vanoshanda mugungwa. Uye zvakare, trident yake inowedzera kukosha kune zvarinoreva, nekuti trident chiratidzo chekuwirirana, pfungwa, muviri nemweya, pamwe neyakare, yazvino neyamangwana. Zvakanaka, handizvo? Ini pachangu ndinoda mucherechedzo wayo.
Poseidon tattoo mazano
Ngatione zvimwe designs kwamwari uyu, Poseidon muganda redu.
Gungwa, humambo hwaPoseidon
Gungwa rinoenda kure kure mune tattoo. Chokwadi chaizove dhizaini iyo Poseidon pachake aigona kusarudza kana aida kutora tattoo. Kuti uzviratidze kuna mwari, unogona kumuratidza achibuda mumvura, kana kungoita trident (yero yesimbi uye nebhuruu regungwa zvinoshamisa). Kuti uratidze kutsamwa kwako, sarudza gungwa rakaomarara kana kana chamupupuri pakati pemvura.
Mermaids nedzimwe ngano vagari vegungwa
Muchokwadi, mermaids anga asiri sekuziva kwatinovaita mune zvekare, kubvira vaive nemuviri weshiri panzvimbo yemuswe (muswe wakawedzerwa kune iyo ngano kudzamara isazopfuura kana pasi peMiddle Ages). Uyezve, ivo vaive vasina hukama naPoseidon, sezvo ivo vaive vakabva kune vamwe vamwari verwizi. Nekudaro, uri mugari ane mukurumbira wemakungwa, iwe unogona kuyedzwa kuti uite dhizaini ine ivo sevamiriri.
Dolphin, iyo inoerera yegungwa
Ma dolphin ane hukama husingatarisirwi naPoseidon, sezvo ari iwo ma protagonists eimwe yengano dzake dzinozivikanwa, idzo inotsanangura kwakatangira boka renyeredzi reDolphin (Kunyangwe iwe ungasade kutora tattoo mushure mekusangana naye).
Nhoroondo yacho ndeyekuti Amphitrite, Nereid, akavanda muAtlantis kutiza Poseidon, uyo aida kumuroora. Zvisinei, mumwe wevamwari vamwari, dolphin, yakamuwana pane chimwe chezvitsuwa zveAtlantis ndokumuunza pamberi pamwari, uyo, nekuonga, akapa dolphin nzvimbo pakati penyeredzi.
Mabhiza, chimwe chiratidzo chake
Kana iwe uchifunga kuti hapana munhu anogona kukurova murima, kuti uone kana iwe ukashinga kunyora tattoo bhiza uye kuudza vanhu kuti iri chaizvo rinoreva Poseidon, mudziviriri wemabhiza, aivada zvakanyanya zvekuti akafamba nemabhiza nemugungwa (Kunyangwe yakawanda ine miswe yegungwa yenyoka, zvese zvinofanirwa kutaurwa). Saizvozvo, Munguva yakapfuura, vafambisi vezvikepe vaibaira mabhiza nekuanyudza mugungwa kuti vafambe zvakanaka. Kana iwe ukasarudza chimwe cheizvi, hapana munhu achakurova iwe kune chepakutanga, hongu.
Iyo trident, chiratidzo chayo chikuru
Takatotaura nezvazvo Poseidon's trident, mucherechedzo mukuru wamwari uyu. Nayo aigona kushevedza madutu uye otumburudza matsime. Pasina kupokana ainzwa kushama asina iye, saka zvakajairika kumuona achiperekedzwa naye. Nekudaro, iwe unogona kusarudza akareruka dhizaini, neatatu ega, semuenzaniso.
Triton, mwanakomana waPoseidon
Sevamwari vese vekare, Poseidon aive nevana vazhinji, kunyangwe pamwe inonyanya kuzivikanwa ndeyeTriton, zvakare mwanakomana wevarombo Amphitrite, iyo Nerea watakataura nezvake pakutanga. Triton inomiririrwa seyemerman, ndiko kuti, nemuswe wehove nemuviri wemunhu, kunyange hazvo zvimwe zvinomiririrwa nemuswe wemakungu kana nzara dzacho zvisingawanzoitika.
Kana chinhu chako chiri Poseidon nyora dzinoreva kuna mwari nenzira yakasviba (asi iwe usati wapedza kufarira pfungwa yemabhiza), usatonge kunze kuchimiririra kuburikidza nenyika yayo, Neptune, iyo inotora zita rayo kubva muchiLatin vhezheni yaPoseidon. Inotaridzika yakakura pane diki tattoo ine yakanaka bhuruu ruvara.
Waizviziva here Poseidon ndicho chikonzero varombo Ulysses vasingakwanise kuenda kumba? Mwari vanotsamwa zvekuti vanomupa mhosva yekudzungaira mugungwa kwemakore. Naizvozvo, imwe nzira yekurangarira mwari uyu ndeyokuita mareferensi kune ino yekare zvinyorwa, chikonzero chakakwana chekuisa quote muchiGiriki.
Uye zvechokwadi Poseidon
Uye pakati pematato aPoseidon, hongu, mareferenzi kuna mwari pachake aisagona kunge asipo. Chimirira icho akatsamwa kana kufara, mune chero mamiriro ezvinhu, inogara iri zano rakanaka kumuperekedza neyakavimbika trident yake. Inotaridzika zvakanyanya kunaka musitayera yechokwadi, ine bhuruu uye girini mavara anodzokorora kunaka kwegungwa.
Poseidon tattoos akafuridzirwa namwari wemaoko kutora, handiti? Tiudze, chii chaunofarira dhizaini? Iwe unofunga isu takarasikirwa chero? Rangarira kutiudza isu mune zvakataurwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Kufungidzira Tattoos » Mavara ePoseidon, mwari wemakungwa
Harry Styles nyora